Ski Goggles သင်ဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာရှာဖွေပါ။ - ULLER
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း / သတင်း
Ski Goggles သင်ဘယ်တော့အသုံးပြုသင့်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
စက်တင်ဘာလ 18, 2020
ကျွန်ုပ်၏ Ski Goggles အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်သင့်သလား။
El နှငျးလြှော ၎င်းသည်လူအားလုံး၏စိန်ခေါ်မှုနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဆီးနှင်းအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အလွန်များပြားသောပုံစံများ၊ ခုန်ချမှုများ၊ pirouettes နှင့်လှပသောလှည့်ကွက်များရှိသောကြောင့်စကားတစ်မျိုးထက်မကသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စွန့်စားမှုအားကစားများကဲ့သို့, သင်အမြဲလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ... သင်အမြဲတမ်းကောင်းသောယူသင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလား နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး သင်ဤအားကစားလေ့ကျင့်သည့်အခါအကာအကွယ်?
အားကစားအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုယူလာပါ နှငျးလြှော ၎င်း၏ပုံစံများကိုမဆိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည် နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး။ ထို့အပြင်နှင်းဖုံးဒေသများ၌အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်ကောင်းကင်၌နေ၏အနေအထားနိမ့်ကျပြီးနေရောင်ခြည်များသည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အတူအလွန်မြင့်မားသောကြောင့်မျက်စိ၏ကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်စေသည်။ ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ရှားနေစဉ်နှင်းလျှောစီးသည့်အခါကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံရရှိစေရန်နှင်းလျှောစီးသည့်အခါဒြပ်စင်များနှင့်နှင်းကျသောလေများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ။
မည်သည့် SKI Goggles ကိုကျွန်ုပ်ရွေးရမည်နည်း။
အဲဒါကိုမင်းစဉ်းစားပါ မျက်မှန် နှငျးလြှောသူတို့သည်နေရောင်ခြည်သင့်ရောင်ခြည်မှသင့်လျော်စွာကာကွယ်ရန် ISO စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရမည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းတို့သည် CE မှထောက်ခံချက်နှင့်ဥရောပလုံခြုံရေးစံနှုန်းများကိုလိုက်နာရမည်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းတို့သည်ဘေးတိုက်ဒေသများအပါအ ၀ င်သင်၏မျက်နှာနှင့်အလွန်ကိုက်ညီရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သတိရပါ မျက်မှန် နှငျးလြှော သူတို့သည်သင်၏မျက်လုံးများကိုနေရောင်ခြည်မှကာကွယ်ပေးရုံသာမကသင်၏နှင်းလျှောစီးသည့်အခါလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လည်းကူညီပေးလိမ့်မည်၊
နောက်တစ်ခါရွေးချယ်ပါ gafas နှင်းလျှောစီး၏အမှန်တရားကတော့တရား ၀ င်ခွင့်မပြုတဲ့စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်စျေးကွက်များမှာ ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အားလုံးဟာတူညီတဲ့တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါဘာမှမရှိဘူး! အဆိုပါထောက်ခံချက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအစဉ်အမြဲဖြစ်ပါတယ် နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ကြည်လင်သောရွေးချယ်စရာများနှင့်မော်ဒယ်များကိုပေးသောအွန်လိုင်းစတိုးများတွင်ဖြစ်သည်။
ဆီးနှင်း၌အားကစားကစားသောအခါအလွန်ကောင်းသောအမြင်အာရုံရှိခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းမွန်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အမြင်အာရုံကိုရရှိစေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောသူတို့ကိုမှန်ကန်သော။
သင်အမြဲရွေးချယ်ရမည် နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး အလွန်အစွန်းရောက်သောအခြေအနေများတွင်နှင်းလျှောစီးနေစဉ်ပိုကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်လျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် မျက်မှန် နှငျးလြှောနှင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်ဈေးအကြီးဆုံးသောမျက်နှာဖုံးများကို ၀ ယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။
SKI GOGGLES မှန်ဘီလူးတွေရဲ့ဘာအမျိုးအစားလဲ။
လောလောဆယ်တွင်မတူညီသော filter အမျိုးအစားများရှိသည် မျက်မှန် နှငျးလြှောCAT0 မှ CAT4 အထိ။ အမျိုးအစားတစ်ခုစီမှနံပါတ်များသည်မှန်ဘီလူးများသည်မည်မျှမှောင်မိုက်ပြီး၎င်းတို့ပေးသောအလင်းစုပ်ယူမှုပမာဏကိုဖော်ပြသည်။ ယင်းသည်အကာအကွယ် UV400 မှရရှိသောဓါတ်ရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုနှင့်ကွဲပြားကြောင်းသတိပြုပါ။
CAT0 သည်အနိမ့်ဆုံးကိုစုပ်ယူသည် (၄ င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနီးပါး) ဖြစ်ပြီး CAT4 သည်အမြင့်ဆုံးကိုစုပ်ယူသည်။ သာမန်အရာတစ်ခုမှာသင့်တွင်အထူးမျက်စိအခြေအနေမရှိပါကသင်အများဆုံးအသုံးပြုမည့်သူများသည်အမျိုးအစား ၁ နှင့်အမျိုးအစား ၃ ဖြစ်သည် လေ့ကျင့်ရန် နှငျးလြှော သို့မဟုတ်နှင်းလျောစီး။
အမျိုးအစား 0: ၎င်းတို့သည် ၈၀% မှ ၁၀၀% အထိပွင့်လင်းမြင်သာသော crystals များနှင့် light transmission filter များဖြစ်သည်။ သူတို့ကအရောင်မရှိဘဲအလွန်နူးညံ့သောအရောင်ရှိနိုင်သည်။ သူတို့ကအလေ့အကျင့်များအတွက်ညွှန်ပြနေကြသည် နှငျးလြှော ညသို့မဟုတ်အစောပိုင်းနေထွက်မတိုင်မီ။ တိမ်ထူထပ်သောနေ့များသို့မဟုတ်နှင်းမုန်တိုင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
အမျိုးအစား 1: ၄၃% မှ ၈၀% သို့၎င်း၏အလင်းထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပျော့ပျောင်းသောအရောင်ရှိသောမှန်ဘီလူးများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချသည့်အခါအသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအလွန်မြင့်မားသောအပြင်ဘက်မှတောက်ပမှုမှအဆင်မပြေစေရန်။
အမျိုးအစား 2: သူတို့ကအတန်အသင့်မှောင်မိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း၏အလင်းထုတ်လွှတ်မှုသည် ၁၈% မှ ၄၃% အထိစစ်ထုတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပျမ်းမျှတောက်ပသောနေ့ရက်များအတွက်ညွှန်ပြသည်။
အမျိုးအစား 3: ၎င်း၏အလင်းထုတ်လွှတ်မှုသည် ၈% မှ ၁၈% သို့စစ်ထုတ်သည်။ ၄ င်းတို့တွင်အထူးသဖြင့်အထွတ်အထိပ်အချိန်များတွင်နေရောင်ခြည်ခံစားရရန်လုံလောက်သောမှောင်မိုက်သောအရောင်ရှိသည်။ သူတို့ကအားကစားလေ့ကျင့်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအမှောင်ထုကိုပေးသည် အိမ့်ပြင်တွင်အလင်း၏ပြင်းထန်မှုသည်အလယ်အလတ်မှပြင်းထန်သောသို့ပြောင်းသည်။
အမျိုးအစား 4: ၎င်း၏အလင်းထုတ်လွှတ်မှုသည် ၃% မှ ၈% အထိစစ်ထုတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမျိုးအစားအားလုံး၏အမှောင်ဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏ထုတ်လွှင့်မှု filter များသည် ၃% မှ ၈% အထိသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို CAT3 မှန်ဘီလူးသည် skier အတွက်မလုံလောက်သောအရောင်တောက်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်။
အများဆုံး IDEAL SKI GOGGLES ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများ
မျက်လုံးကာကွယ်ခြင်းသည် တိုင်း skier များအတွက်မရှိမဖြစ်. အဲဒါကိုသတိရပါ gafas နှင်းလျှောစီး၏ သင့်ကိုဓါတ်ရောင်ခြည်မှအမှန်တကယ်ကာကွယ်ရန်၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်း 99% သို့မဟုတ် 100% ကာကွယ်မှုရှိသင့်သည်။
သူတို့သေချာအောင်လုပ်ပါ UV-400 ကာကွယ်မှု၊၎င်း၏ filter သည် UVA နှင့် UVB rays များမှသင့်အားကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒါသင့်ရဲ့ နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး သူတို့ကနေလာ၏ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကိုနာနိုမီတာ ၄၀၀ ထက်နည်းသောလှိုင်းအလျားနှင့်မှန်ကန်စွာပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။
ဝယ်ယူမျက်မှန် နှငျးလြှော လဲလှယ်သံလိုက်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်တွေ့ရှိရသောရာသီဥတုနှင့်အလင်းအခြေအနေများအရကောင်းမွန်သောမှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုလဲ? သင်ချက်ချင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောသင့်အရေပြားရှိမှန်ဘီလူးအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မျက်မှန်ကိုရွေးချယ်ပါ နှငျးလြှော Antifog စနစ် (သို့)“ Antifog system” နဲ့အတူပါ” ဤသည်ကသင့်အားလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်မြူဆွယ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
မှမျက်မှန်ကိုရွေးပါ နှငျးလြှော လေဝင်လေထွက်စနစ်နှင့်အတူ။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောမျက်နှာဖုံးများသာလေထုကိုပြန်လည်စီးဆင်းစေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောမြင်သာမှုကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဝယ်ယူ မျက်မှန် နှငျးလြှော သင်၏မျက်နှာနှင့်မျက်နှာကိုမှန်ကန်စွာကိုက်ညီသော သင့်ခေါင်းနှင့်သံခမောက်လုံးကိုကောင်းစွာတပ်ဆင်ရန်၎င်းတို့တွင်ချောသောချင့်ချိန်နိုင်သည့်သိုင်းကြိုးများရှိရမည်။
မျက်မှန်ရှာပါ နှင်းလျှောစီး၏ အလင်း ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းသည်အပူဆုံးပလပ်စတစ် polyurethane ဖြစ်သည်။
နှင်းလျှောစီးအကြောင်းနှင့် ပို၍ လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းများအကြောင်း ပို၍ လေ့လာပါ။
သင်နှင်းလျှောစီးစလုပ်နေလျှင်သင်အတော်အတန်ကြောက်ရွံ့နေနိုင်သည်၊ နှင်းတော၌သွက်လက်စွာလမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးကိုလက်ထဲတွင်သယ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကောက်ယူရန်အတွက်ယခုတွင်သင်သည်လေးစားမှုနှင့်သတိများစွာရှိကြောင်းသေချာသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ လေ့ကျင့်မှုကပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ၎င်းသည်အပ်နှံခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေများနှင့်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်များစွာရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့နှင်းလျှောစီးကိုယူပြီးမင်းကိုယူသွားတာဟာလုံးဝသဘာဝကျပါလိမ့်မယ် နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးနှင့်သင်သည်နှင်းလျှောစီးသည့်အခါသင့်ကို adrenaline နှင့်ဖြည့်ပါ။
ခြောသည် နှငျးလြှော၎င်းသည်အားလုံးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးနှင့်ပြည့်စုံသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်၎င်းကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အများအပြားအမျိုးအစားများနှင့်မျိုးကွဲရှိပါတယ်ပေမယ့် နှငျးလြှော ဒေသတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲမှုကိုပြောနိုင်ပါတယ် နှင်းလျှောစီးပုံစံများ လူကြိုက်အများဆုံးမှာ alpine skiing၊ Cross-country skiing, Cross-country skiing, freeride skiing, speed speed and skiing skiing ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်နှင့်သူတို့အကြောင်းအနည်းငယ်ပိုမိုလေ့လာရန်!
Alpine Skiing သည်အစတွင်စတင်လေ့ကျင့်ခဲ့သောဒေသဖြစ်သောအဲလ်ပ်တောင်အား၎င်း၏အမည်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်နှင့်အကျော်ကြားဆုံးအားကစားပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ယင်းကို "နှင်းလျှောစီး" ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည်အပြာရောင်နှင့်အနီရောင် beacons (gates) ဖြင့်မှတ်သားထားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းမတ်စောက်သောတောင်စောင်းများပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးအချိန်ကိုနှင်းလျှောစီးသောဆင်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
ဖျက်သိမ်းသည် သုံးရက်ကြာယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် breakneck speeds နှင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Slalom or Slalom: လမ်းတစ်လျှောက် (ဂိတ်တံခါး ၅၅ မှ ၇၅) ကြားတွင်ဂိတ်တံခါးများစွာနှင့်အတူအကွာအဝေး ၇၅ စင်တီမီတာနှင့် ၁၅ မီတာအကွာအဝေးရှိသည်။ ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်အလှည့်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြပြီးအတော်လေးရှုပ်ထွေးဖြစ်လေ့; ကျွမ်းကျင်သူများ၏အကြိုက်ဆုံး။
Slရာ Slalom: လမ်းကြောင်းတစ်ခု၌နှစ်ချပ်ရှိသည်။ အမြန်နှုန်းဖြင့်ထောင့်များတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိရန် skier လိုအပ်သည်။ နှစ်ကြိမ်စလုံး၏အနည်းဆုံးပမာဏသည်အနိုင်ရသူကိုကြေငြာသည်။ ဤနည်းသည်သင်၏တံခါးများအကြားအကွာအဝေးကိုအနည်းဆုံး ၅ မီတာအထိလျှော့ချပေးသည်။ ဒီ mode သည်ပုံမှန် Slalom နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဂိတ်တံခါးအရေအတွက်လျော့နည်းစေသည်။
Super Giant Slalom (Super G) ဤပုံစံသည်မြန်နှုန်းကိုတိကျမှုနှင့်သွက်လက်မှုရှိစေပြီးတစ်ခုတည်းသောဆင်းသက်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ အချိန်တိုအတွင်းပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသူသည်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။
အပြိုင်: ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းတိုတစ်ခုတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆင်းသက်မှုနှစ်ခုပါဝင်သည်။ စင်ပြိုင်နှင်းလျှောစီးအားကစားသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအနိုင်ရသူသည်ပန်းဝင်မျဉ်းကိုပထမဆုံးဖြတ်ကူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်: ၎င်းတွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါရှိသည်။ တစ်ခုမှာ slalom အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေထက်တိကျမှုနဲ့မြန်နှုန်းနည်းနည်းပိုလိုအပ်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်သူ၏အကောင်းဆုံးအချိန်နှစ်ခုမှအနိမ့်ဆုံးရမှတ်ကိုရရှိသောပြိုင်ဘက်သည်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။
El alpine နှင်းလျှောစီး တကယ်တော့သည် အများဆုံးလေ့ကျင့်နှင်းလျှောစီးပုံစံ ဒီအားကစားကိုသင်ဘာကြောင့်စတင်ခဲ့တာလဲ၊ သင့်မှာမှန်ကန်သောပစ္စည်းနှင့်ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းမရှိပါကသင်မလုပ်သင့်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး.
၎င်းကို Nordic skiing, Cross-country skiing or Cross-Country နှင်းလျှောစီး။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်အမြန်ဆုံးသွားနိုင်ခြင်း၊ လှည့်ဖျားခြင်း၊ ဤရွေ့ကား Nordic နှင်းလျှောစီး၏ပုံစံများ:
ဂန္ထဝင် Nordic နှင်းလျှောစီး
Cross-country နှင်းလျှောစီးနှင်းလျှောစီးနှင်းလျှောစီးကိုတောင်တက်တောင်တက်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးသိသိသာသာပြင်ဆင်ထားသည့်နေရာများတွင်မပြုလုပ်ပါ။ တောင်ပေါ်သို့တက်ခြင်းနှင့်ဆင်းသက်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒီ mode မှာ နှငျးလြှောအဆိုပါတက်နှင့်နွယ်ဖွားနှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး လေ့လာရေးခရီးအဖြစ်ထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။
Freeride သည်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည် နှငျးလြှော မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပစ္စတင်လုပ်ထားပြီးအထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် မြင်းစီး လွတ်လပ်သောစိတ်နှင့်။ ၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းမသွားသောကြောင့်မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုအသာပုတ်သူသည်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကြောင့်ရှုခင်းများကိုကွဲပြားခြားနားပြီးထူးခြားသည့်နည်းဖြင့်တန်ဖိုး ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သင်တန်းတက်သည်။ ဒါဟာအမှုန့်ဆီးနှင်း, မတ်စောက်သောတောင်စောင်းနှင့်ရှိရာအပျိုစင်တောင်ပေါ်မှာလေ့ကျင့်သည် သဘာဝအတားအဆီးတွေ၊ ဒါကြောင့်အချို့သောစွန့်စားမှုနှင့် adrenaline အများကြီးပါဝင်ပတ်သက်ပါဘူး။ Freeride ဆိုသည်မှာအားကစားတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောရေကူးသမားများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရှိဆုံးအံ့မခန်းပုံစံများ၏တ ဦး တည်းစဉ်းစား နှင်းလျှောစီး။ဤပုံစံကိုလေ့ကျင့်ရာတွင် Skiers များသည်တန့်၊ ခုန်နှင့် pirouette များစွာကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းကိုပျော်စရာပုံစံတစ်ခုအဖြစ်ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်းယနေ့တွင်ဆီးနှင်းအားကစားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ တန့်ဖျော်ဖြေရန်အမြင့်နှင့်ခုန်ကျော်ခြင်း (တွင်းပေါက်နှင့်တောင်ပို့များ) ပါ ၀ င်သည်။ အလွတ်သို့မဟုတ် freeski ပုံစံများမှာ -
SPEED / KILOMETER သည် SKI ကိုစတင်ခဲ့သည်
အားကစားအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့် 1km လမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိရန်ဆင်ခြေလျှောကိုဆင်းခြင်းပါဝင်သည်။ သာမန်အားဖြင့်အမြန်နှင်းလျှောစီးသူများသည်ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော်လွန်၍ များသောအားဖြင့် polyurethane သို့မဟုတ် latex နှင့်ပြုလုပ်ထားသောဝတ်စုံများနှင့်လေခွင်းသံခမောက်များ၊ အနည်းဆုံး ၁ မီတာအကန့်အမြင့်များနှင့်အရှည်အားဖြင့် ၂.၄ မီတာရှည်သော skis များနှင့် 200cm အကျယ်ရှိကြသည်။ El နှငျးလြှော မြန်နှုန်းကြောင်းအားကစားတစ်ခုပုံစံဖြစ်ပါတယ် ၎င်းသည် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံစိန့်မိုရီစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်၊ သို့သော်လက်ရှိအားဖြင့်အိုလံပစ်အမျိုးအစားအားကစားစည်းကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမခံရပေ။
ယခုငါတို့အကြောင်းအနည်းငယ်ပိုမိုသိသော နှင်းလျှောစီးပုံစံများ y အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးဘာတွေလဲ သင်သည်ဤအားကစားအတွက် ၀ ယ်နိုင်သည်၊ သင်အမှန်တကယ်ထိုက်တန်သောကြောင့်သင်ထွက်သွားရန်နီးကပ်လာပြီးဆီးနှင်းနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်သည်။ အစွန်းရောက်အားကစားများသည်ကာယပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသာမကအကောင်းဆုံးအားကစားအသင်းများလိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ။
အများကြီးလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အချို့သောကောင်းသောအတူစွန့်စားမှုများအတွက်အလွန်ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပါ နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ယင်း၏ပုံစံများမဆို၌!
ဥရောပ၌ MBT လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အလှဆုံးလမ်းကြောင်းများ။ စပိန်နိုင်ငံရှိ Ruta del Jamónမှနော်ဝေးရှိ Fjords မှသည်စကော့တလန်ရှိတော်ဝင် Deeside အထိတောင်တန်းများအတွင်းရှိပရဒိသုများ၊
Camino de Santiago အကြောင်းသင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလမ်းညွှန်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလမ်းကြောင်း ၄ ခုသင်ပေးရုံသာမကဤလမ်းကြောင်းကိုလုပ်ရန်သော့များကိုလည်းပေးသည်
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လူသား၏၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်စွမ်း။ ၁၇ နာရီအောက်၊ ပြေး၊ ရေကူးခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းအကြား ၂၂၆ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ စူပါလူသားတွေရှိတယ်၊
မဖြစ်နိုင်သည့်စက်ဘီးဖြင့် rest ၀ ရတ်တောင်ခြေစခန်းသို့တက်ပါလား။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်အရူးအသံ, အားကစားသမားအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိသည်! ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီဟာ Omar Di Feliceaရဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ
မင်းရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်တော့မယ့်နေရာသင့်ရဲ့ခေါင်းထဲကအသံလေးကိုအသံတိတ်နေသလိုခံစားရတယ်။ ဘယ်နေရာမှမရပ်ချင်ဘူး၊ ရပ်ချင်နေပြီ၊ သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးပြီဟုရုတ်တရက်ခံစားရသည်
စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြေးနေသည့်လမ်းကြောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်အကောင်းဆုံးသဘာဝလမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြောက်ဘက်မှဥရောပတောင်ထိပ်ကို ဖြတ်၍ မီတာကိုရှာဖွေခြင်း
ဒီ post မှာတော့သမိုင်းမှာကျခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးစက်ဘီးစီးသူတွေရဲ့လမ်းကြောင်းအကြောင်းပြောနေတာပါ။ သင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားသင်ထွက်ခွာသွားတိုင်းမင်းမှုတ်သွင်းရန်သင့်အားပေးသည်